Miresaka momba ny WebHarvy, iray amin'ny The Best Web Scrappers Free
. Ny sasany amin'ireo fitaovana ireo dia mety ho an'ireo mpampiasa tsy teknika, mpikirakira sy mpanabe, raha ny hafa kosa no safidy talohan'ny orinasa, marika lehibe ary orinasa. WebHarvy dia rindrambaiko vaovao maimaim-poana vaovao izay afaka mamoaka avy hatrany ny sary avy amin'ny sary, mailaka, lahatsoratra ary URL. Ity freeware ity dia mamonjy ny fotoanao amin'ny fitrandrahana ny data ary manome ny votoaty amin'ny endrika hafa. WebHarvy dia mora ampiasaina fitaovana izay manomboka manasitrana ao anatin'ny segondra. Mampiato ny angona avy amin'ny tranonkala samihafa mifototra amin'ny teny fiteninao ary mamonjy azy amin'ny endrika format malalaka sy azo vakiana. Ny sasany amin'ireo safidy tena mahaliana indrindra dia voalaza etsy ambany:
1. Tsindrio ary tsindrio ny interface
Raha toa ka misy sary amin'ny sary , WebHarvy dia manana teboka iray ary tsindrio ny interface ka tsy mila manoratra scripts sy code ianao raha manaparitaka ny data. Plus, azonao ampiasaina ny tranokala fananganana azy mba hivezivezina amin'ny tranonkala isan-karazany ary misafidy ny fampahalalana mba hikorontana amin'ny tsindry maody. WebHarvy dia iray amin'ireo fitaovana maotina vitsivitsy izay mampanantena vokatra tsara izay mampanantena vokatra tsara ary tsy mandany vola aminao.
2. Mianjera avy amin'ny tranonkala marobe
Amin'ny fampiasana WebHarvy, afaka manangona mora foana ny angona avy amin'ny tranonkala isan-karazany toy ny lisitry ny vokatra, tranombarotra an-tserasera, adiresy mailaka, tranokala vaovao, vavahadin-tserasera, sns.Ity fitaovana ity, dia tsy manaisotra fotsiny ny angon-drakitra, fa mahatonga azy ho mora ihany koa ny mikaroka ny tranonkalanao ary manatsara ny toerany amin'ny valin'ny fikarohana.
3. Azonao atao ny manodina ny fampahalalana avy amin'ny lisitry ny rohy izay mety mitarika amin'ny pejy mitovy na lisitry ny tranonkala miaraka amin'ny WebHarvy
.Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny milaza fa afaka mampiasa WebHarvy ianao mba hisintonana ny angona avy amin'ny tranonkala mifototra amin'ny sokajy toa an'i Amazon sy eBay raha tsy manelingelina ny kalitao. Ankoatra izany, ity fampitahàna mora ampiasaina ity dia manasaraka ny angon-drakitrao amin'ny sokajy samihafa.
Ny fampifangaroana rakitra amin'ny sary dia iray amin'ireo olana lehibe atrehantsika amin'izao andro izao. Miaraka amin'ny WebHarvy, afaka maka sary ianao raha toa ka feno tanteraka na ampahany amin'ny fiara sarotra. Ity fitaovana ity dia hamafa ny sary hita ao amin'ny tranonkala sy tranokala e-commerce isan-karazany.
5. Famaritana ny Auto Modèle
Ity fitaovana ity dia samy hafa amin'ny fandaharana mahazatra amin'ny ordinatera hafa satria ny WebHarvy dia afaka mamantatra ny lamin'ny data hita ao amin'ny tranonkala samihafa. Midika izany fa tsy mila manala ny angon-drakitra manokana avy amin'ny tranonkala sy adiresy mailaka ianao. Izany dia satria ny WebHarvy dia hametraka ny zava-drehetra ho anao ary mamaritra avy hatrany ny sokajy sy ny lamin 'ny angon-drakitra.
6. Ny fanoritsoritana ny tenifototra fototra
Mifanohitra amin'ny tolotra maimaim-poana hafa, WebHarvy dia manatsara ny fanesorana ny teny fototra ho an'ny mpampiasa azy. Midika izany fa raha tianao ny hanangona vaovao avy amin'ny tranonkala mifototra amin'ny teny fanalahidy dia azonao atao ny manitsy ny vohikala WebHarvy ary avelao ny fitaovana hanatanterahana ny asany. Halefa avy amin'ny tranonkala ny data ka tsy manelingelina ny teny fanalahidyo, ary dia tsy misy fahadisoana foana.
Azo antoka ny filazana fa WebHarvy dia vahaolana tsara amin'ny Kimono Labs sy Import. io. Ity maimaim-poana ity dia ahafahanao mampihatra ny fanehoan-kevitra tsy tapaka amin'ny lahatsoratra sy ny loharano HTML ary ny angona rakitra ho anao raha tsy manelingelina ny kalitao Source .